MYANMAR POLITICAL NEWS, ART AND IDEA: 2009
ပိတောက်ပွင့်သစ် စာပေအနုပညာမဂ္ဂဇင်း၊ အမှတ် (၂၇)၊ အောက်တိုဘာ၊ ၂၀၀၉ မှ
(See the following4scan pages)
Posted by Nyo Gyi, Don Nyo Gyi, Original Nyo Gyi at 25.12.090COMMENTS
Posted by Nyo Gyi, Don Nyo Gyi, Original Nyo Gyi at 22.12.090COMMENTS
ရတနာပုံ သတင်းစာ ၀န်ထမ်းများ အလုပ်ပြုတ်
(စိုးမိုး/ ၂၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၉)
ခေတ်ပြိုင်၊ The New Era Journal မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
Previous Related News From My Blog
1. စစ်အဆိုးရ၏ မန္တလေးထုတ် ရတနာပုံ သတင်းစာက " ဆူပူမှုဖြင့် ဒီမိုကရေစီ ရနိုင် " ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့
2. ဆူပူမှုဖြင့် ဒီမိုကရေစီ ရနိုင် - နောက်ဆက်တွဲ
3. ရတနာပုံသတင်းစာတိုက်မှ ကွန်ပျူတာသမား အောင်တင်ဝင်း လည်း ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရသူများထဲတွင် ပါဝင်နေ
Unfinished Khaing Shon Le Yi Saga
သွားလေသူ မခိုင်ရွှန်းလဲ့ရည်၏ မပြီးဆုံးသေးသော ဇာတ်လမ်း
ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံ/ဆေးခန်းများတွင် အချိန်ပိုင်း/အချိန်ပြည့် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် ဆရာဝန်များ ဆေးကုသရေးဆိုင်ရာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စသတိပေးစာ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနက ထုတ်ပြန်
(Please See the following attached2Scan Pages)
Posted by Nyo Gyi, Don Nyo Gyi, Original Nyo Gyi at 17.12.090COMMENTS
အဲဒီဆောင်းပါးတွေထဲကမှ (၂၅၊ နိုဝင်ဘာ၊ ၂၀၀၉)ရက်နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာမှာ ဖော်ပြပါရှိခဲ့တဲ့ ကလောင်အမည် ယိန်းနန်ရဲ့ "မျှော်လင့်မထားသော အတွေ့အကြုံများ" ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးကိုလည်း သတင်းစာဖတ်ဖြစ်သူများ သတိထားမိမယ်ထင်ပါတယ်။
(ယိန်းနန်ကလောင်အမည်နဲ့ " မျှော်လင့်မထားသော အတွေ့အကြုံများ " ဆောင်းပါးကို ခွေးဘလော့ဂ် http://kyeesaytaman.blogspot.com/2009/11/blog-post_25.html မှာလည်း ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။)
အခု ပြောချင်တာက ဆောင်းပါးထဲက စာသားတွေအကြောင်းကို မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီ "မျှော်လင့်မထားသော အတွေ့အကြုံများ" ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးနဲ့ တွဲပြီး ဖော်ပြထားတဲ့ ကလောင်အမည် " ယိန်းနန် " ဆိုတာကို မီးမောင်းထိုးပြလိုပါတယ်။
အဲတော့ "မျှော်လင့်မထားသော အတွေ့အကြုံများ" ဆောင်းပါးရေးသူရဲ့ ကလောင်အမည်ကို စစ်အာဏာရှင်တွေက တမင်တကာ အကွက်ချပြီး " ယိန်းနန် " ဆိုပြီး ဖော်ပြတယ်။ ပြီးတော့ ဆောင်းပါးထဲမှာလည်း အဲဒီ ဗိုလ်ယိန်းနန်က ယောက်ျားလေးတစ်ဦးလိုပဲ ပြောဆိုရေးသားထားတယ်။ လရှီးဘာသာစကားအရ ယိန်းနန်ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်က သမီးကြီး။ ကဲ သေချာစဉ်းစားကြည့်ကြပါဦး။ ဒါဟာ ဘာသဘောလဲ။ သွေးရိုးသားရိုးတော့ မဟုတ်တန်ရာ။
Posted by Nyo Gyi, Don Nyo Gyi, Original Nyo Gyi at 14.12.090COMMENTS
Labels: "MEDIA to MEDIA" FIGHTING, MY NEWS, MY WRITINGS, PHOTOS
GIVE BACK ME TAUNG THAR (By Paing Soe Wai)
(Poetry Life : ကဗျာဆရာ ကဗျာအယူအဆနှင့် ကဗျာရေးခြင်း စာအုပ်မှ ကဗျာဆရာ ပိုင်စိုးဝေ ၏ တောင်သာတမ်းချင်း ကဗျာအား ကူးယူဖော်ပြသည်။)
Posted by Nyo Gyi, Don Nyo Gyi, Original Nyo Gyi at 9.12.090COMMENTS
ပါဝင်ရေးသားကြတဲ့ ကဗျာဆရာတွေကတော့ -
(POETRY LIFE ထဲက ကဗျာအချို့ကို နောက်ပိုင်းမှာ ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါ့မယ်။ ဥပမာ- ပိုင်စိုးဝေရဲ့ တောင်သာတမ်းချင်း... ကဗျာ)
Posted by Nyo Gyi, Don Nyo Gyi, Original Nyo Gyi at 5.12.090COMMENTS
Posted by Nyo Gyi, Don Nyo Gyi, Original Nyo Gyi at 3.12.090COMMENTS
Sai Sai Kham Hlaing's Song, Beggars, Thieves, Robbers And Villains From Burma
Don't Cry Sai Sai - More free videos are here
metacafe မှာ တွေ့ရတဲ့ MTV တိုလေးတစ်ခုပါ။ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်နဲ့ သီရိဆွေတို့ သီဆိုထားခဲ့တဲ့ " ဖုတ်လှိုက်ဖုတ်လှိုက် " သီချင်းကို ဗမာပြည်က သူတောင်းစားကလေးငယ်များက ပြန်လည် သီဆိုပြီး တောင်းရမ်းစားသောက်နေရပုံ မြင်ကွင်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မူဗီကလစ်နာမည်ကို metacafe မှာ တင်ထားသူ demonlay က " မငိုနဲ့နော် စိုင်းစိုင်း " Don't Cry Sai Sai လို့ အမည်ပေးခဲ့တယ်။
အာဏာကို တလွဲသုံးပြီး ငွေညှစ်တဲ့သူတွေနဲ့ ကလိန်ကကျစ်ကျတတ်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုတော့ " သူခိုး၊ ဓားပြများ " လို့ပဲ အမည်တပ်ရတော့မယ်ထင်ပါတယ်။
Don't Cry Sai Sai Movie Address-
Posted by Nyo Gyi, Don Nyo Gyi, Original Nyo Gyi at 25.11.090COMMENTS
Labels: MY NEWS, MY WRITINGS, PHOTOS, SATIRE
November 26, 2009 is My Blog's 2nd Birthday.
Labels: BLOG BIRTHDAY, INTRODUCTION MYSELF, MY NEWS, PHOTOS
Computer Staff, AUNG TIN WIN, From Yadanabon Newspaper Was Also Arrested
ရတနာပုံသတင်းစာတိုက်မှ ကွန်ပျူတာသမား အောင်တင်ဝင်း လည်း ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရသူများထဲတွင် ပါဝင်နေ
စစ်အဆိုးရ၏ တောင်ဝှေးတစ်ခုဖြစ်သည့် ရတနာပုံသတင်းစာ (၁၃၊ ၁၁၊ ၂၀၀၉) ရက်နေ့ အာဘော် " ဆူပူမှုဖြင့် ဒီမိုကရေစီ ရနိုင် " ဟု " မရနိုင် " အစား " ရနိုင် " ဟု ဖော်ပြခြင်းကိစ္စအပြီး ရတနာပုံသတင်းစာမှ ညပိုင်းအယ်ဒီတာ ကိုမြင့်နိုင်၊ စာပြင်အရာရှိ ဦးခင်မောင်စိုးနှင့် ကွန်ပျူတာခန်းမှ ကွန်ပျူတာဆရာ အပါအ၀င် ၀န်ထမ်း (၆)ဦးထက် မနည်းကို စစ်အဆိုးရ ထောက်လှမ်းရေးမှ ပြည်သူ့မျက်ကွယ်တွင် ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနှိပ်စက်လျက်ရှိကြောင်း ပြီးခဲ့သည့် ပို့စ်တွင် ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
ယခုအခါ အဖမ်းဆီးခံ ရတနာပုံသတင်းစာတိုက်၊ ကွန်ပျူတာခန်းမှ ကွန်ပျူတာသမား၏ နာမည်မှာ အောင်တင်ဝင်း ဖြစ်သည်ဟု သိရှိရပါသည်။
Related Previous News
1. ဆူပူမှုဖြင့် ဒီမိုကရေစီ ရနိုင် - နောက်ဆက်တွဲ
2. စစ်အဆိုးရ၏ မန္တလေးထုတ် ရတနာပုံ သတင်းစာက " ဆူပူမှုဖြင့် ဒီမိုကရေစီ ရနိုင် " ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့
Posted by Nyo Gyi, Don Nyo Gyi, Original Nyo Gyi at 22.11.090COMMENTS
Labels: "MEDIA to MEDIA" FIGHTING, MY NEWS
At Least6Men From Yadanabon Newspaper Were Arrested After Word Game
ဆူပူမှုဖြင့် ဒီမိုကရေစီ ရနိုင် - နောက်ဆက်တွဲ
(၁၃၊ နိုဝင်ဘာ၊ ၂၀၀၉)နေ့ထုတ် မန္တလေးအခြေစိုက် ရတနာပုံသတင်းစာ၌ " ဆူပူမှုဖြင့် ဒီမိုကရေစီ ရနိုင် " ဟူသော နှိုးဆော်စာ ပါရှိလာရာ ယခုအခါ ရတနာပုံသတင်းစာမှ တာဝန်ရှိသူ (၆)ဦးထက် မနည်း စစ်ထောက်လှမ်းရေး၏ ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခြင်းခံနေရကြောင်း ခိုင်လုံသည့် သတင်းရပ်ကွက်အဆိုအရ ကြားသိရသည်။
ညပိုင်းအယ်ဒီတာ ကိုမြင့်နိုင်၊ စာပြင်(Proofread) အရာရှိ ဦးခင်မောင်စိုးနှင့် ကွန်ပျူတာစာစီခန်းမှ ကွန်ပျူတာသမားအပါအ၀င် (၆)ဦးခန့်မှာ ဖမ်းဆီး၊ နှိပ်စက်၊ စစ်ဆေးခြင်းခံနေရကြောင်းသိရသည်။ (ထပ်မံကြားသိရနိုင်သည့် ရတနာပုံသတင်းများကို အလျဉ်းသင့်လျှင် ဆက်လက် တင်ဆက်သွားပါဦးမည်။)
(၁၃၊ နိုဝင်ဘာ၊ ၂၀၀၉) ရတနာပုံသတင်းစာ၌ " ဆူပူမှုဖြင့် ဒီမိုကရေစီ ရနိုင် " ပါပြီးကတည်းက ရတနာပုံသတင်းစာမှ တာဝန်ရှိသူ အဆိုပါ (၆)ဦးထက် မနည်းကို ဖမ်းဆီးထားရာ ယနေ့အချိန်ထိ ထိုအဖမ်းဆီးခံများမှာ ဘယ်ဆီဘယ်ဝယ်ရောက်နေမှန်းလည်း မသိရသေး၊ ဘာလုပ်ခံထားရမှန်း (သေသလား/ရှင်သလား)လည်း မသိရသေးသဖြင့် အဖမ်းဆီးခံများ၏ မိသားစုများမှာ အလွန်တရာ တုန်လှုပ်၊ စိုးရိမ်၊ ဒေါသထွက်နေရကြောင်းလည်း နောက်ဆက်တွဲ ကြားသိရပါသည်။
လက်ရှိ မန္တလေးမြို့မှ ရတနာပုံသတင်းစာမှာ လပခ(အလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်)လက်အောက်ခံ ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးတပ်က စီမံခန့်ခွဲချုပ်ကိုင်နေသော သတင်းစာဖြစ်ကြောင်း၊
သတင်းစာတိုက်တွင် စစ်တပ်အဖွဲ့ဝင်များလည်း ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်နေကြောင်း နောက်ဆက်တွဲ၏ နောက်ဆက်တိုးအဖြစ် သိရှိရကြောင်းပါ။
စစ်အဆိုးရ၏ မန္တလေးထုတ် ရတနာပုံ သတင်းစာက " ဆူပူမှုဖြင့် ဒီမိုကရေစီ ရနိုင် " ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့
Posted by Nyo Gyi, Don Nyo Gyi, Original Nyo Gyi at 19.11.090COMMENTS
Labels: "MEDIA to MEDIA" FIGHTING, MY NEWS, PHOTOS
Mandalay Yadanabon Newspaper Said, " To Get Democracy, Let's Protest"
" ဆူပူမှုဖြင့် ဒီမိုကရေစီ ရနိုင် " ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့
" ဆူပူမှုဖြင့် ဒီမိုကရေစီ ရနိုင် " သည်ဟု ၁၃၇၁ ခုနှစ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော် ၁၂ ရက်၊ သောကြာနေ့၊ (၁၃၊ ၁၁၊ ၂၀၀၉)နေ့ထုတ် ရတနာပုံ သတင်းစာ၊ အတွဲ (၁၈)၊ အမှတ် (၁၉၇) နောက်ကျောဖုံး (စာမျက်နှာ- ၁၆) မှာ တရားဝင်ဖော်ပြခဲ့ပါ၏။ (ပူးတွဲပါ ဓာတ်ပုံကို ရှု)
ပုံမှန်အတိုင်း ဆိုလျှင် " ဆူပူမှုဖြင့် ဒီမိုကရေစီ မရနိုင် " ဟု စစ်အဆိုးရက ဖော်ပြလေ့ရှိသော်လည်း ယခုလို " ဆူပူမှုဖြင့် ဒီမိုကရေစီ ရနိုင် " ဟု မန္တလေးထုတ် ရတနာပုံသတင်းစာ (၁၃၊ ၁၁၊ ၂၀၀၉) က ဖော်ပြလိုက်ခြင်းသည် ဗမာပြည်သူလူထုအား " ဒီမိုကရေစီရလိုလျှင် ဆူကြပူကြ " ဟု ရတနာပုံသတင်းစာ (သို့မဟုတ်) စစ်အဆိုးရကိုယ်တိုင်က နှပ်ကြောင်းပေးသည့် သဘောဖြစ်နိုင်ကြောင်း မန္တလေးမြို့ခံများက ပြောဆိုသုံးသပ် နေလျက်ရှိကြ၏။
ထို (၁၃၊ ၁၁၊ ၂၀၀၉) နေ့ထုတ် ရတနာပုံ သတင်းစာ၏ ရှေ့မျက်နှာဖုံးတွင် ကိုသန်းရွှေ သီရိလင်္ကာ ထွက်ခွာကြောင်း သတင်းကို ဖော်ပြထားပြီး နောက်ကျောဖုံးတွင် " ဆူပူမှုဖြင့် ဒီမိုကရေစီ ရနိုင် " ဟု ရေးသားဖော်ပြထားရာ ၎င်းနှစ်ခုကို ယှဉ်တွဲ အဖြေထုတ်ကြည့်မည်ဆိုပါက ကိုသန်းရွှေ သီရိလင်္ကာမှာ ရှိသခိုက် ဗမာပြည် ဒီမိုကရေစီရရှိဖို့ ဗမာပြည်သူပြည်သားများ ဆူကြပူကြရန် မန္တလေးထုတ် ရတနာပုံ သတင်းစာက တိုက်တွန်းနေဘိသကဲ့သို့ ရှိနေပါတော့သည်။
ကဲ ... ဒီမိုကရေစီရရှိဖို့ ဆူကြပူကြ စို့ !!!
(၁၄၊ ၁၁၊ ၂၀၀၉) နေ့ထုတ် ရတနာပုံသတင်းစာ နောက်ဖုံးမှာတော့ " ဆူပူမှုဖြင့် ဒီမိုကရေစီ မရနိုင် " ဟု ပြန်လည် ပြင်ဆင်ဖော်ပြထားကြောင်း တွေ့ ရှိရပါသည်။ (အောက်ပုံ)
Posted by Nyo Gyi, Don Nyo Gyi, Original Nyo Gyi at 15.11.09 1 COMMENTS
Labels: "MEDIA to MEDIA" FIGHTING, MY NEWS, MY WRITINGS, OTHERS' NEWS, PHOTOS
Posted by Nyo Gyi, Don Nyo Gyi, Original Nyo Gyi at 14.11.090COMMENTS
ကဗျာဆရာ ခန့်မင်းထက် အတွက် ကဗျာ
သို့ ... ခန့်ကြီး
မှ ... ကိုအိမ့်
(Khant Min Htet's Photo - MoeMaKa)
ပိတောက်ပွင့်သစ်မဂ္ဂဇင်း ပဲ့ကိုင်ရှင် တော်လှန်ကဗျာဆရာကြီး မောင်စိမ်းနီ၏ သား အလင်္ကာဝတ်ရည်ဂျာနယ်တိုက်မှ ကဗျာဆရာနှင့် ဒီဇိုင်းပညာရှင် ခန့်မင်းထက်တစ်ယောက် ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ (၂၂)ရက်နေ့က စစ်အဆိုးရထောက်ခွေးများ၏ မတရားသဖြင့်ဖမ်းဆီးခြင်းကို ခံခဲ့ရကြောင်း အောက်ပါသတင်းများကို ဖတ်ရှုပြီးသူတိုင်း သိရှိပြီးဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
၁။ ရဲက ဖမ်းသွားသော ကဗျာဆရာ ခန့်မင်းထက် ပျောက်ဆုံးနေ (Mizzima News)
Myanmar NewsMyanmar News
၂။ ကဗျာဆရာ၊ ဒီဇိုင်းပညာရှင် ခန့်မင်းထက် ဖမ်းဆီးခြင်းခံထားရ၊ ယခုအချိန်ထိ မိသားစုက စုံစမ်း၍မရ (MoeMaKa)
ထိုသို့ စစ်အဆိုးရ၏ မတရားသဖြင့် ဖမ်းဆီးခြင်းကို ခံခဲ့ရရှာသည့် ကဗျာဆရာ ခန့်မင်းထက်အတွက် ပိတောက်ပွင့်သစ် စာပေအနုပညာမဂ္ဂဇင်း၊ အမှတ် (၂၂)၊ ဇန်န၀ါရီ၊ ၂၀၀၉ တွင် ဖော်ပြပါရှိခဲ့သည့် ကဗျာဆရာ ကိုအိမ့်၏ "သို့ ... ခန့်ကြီး၊ မှ ... ကိုအိမ့်" ကဗျာအား အမှတ်တရ ကူးယူဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။ ယင်းကဗျာကိုပင် ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လက ထုတ်ဝေခဲ့သည့် "ပိတောက်ပွင့်သစ် ကဗျာရှည်များ" စာအုပ်ထဲ၌ ထပ်မံ ဖော်ပြခဲ့ပါသေးသည်။
(ထို ပိတောက်ပွင့်သစ် ကဗျာရှည်များ စာအုပ်ကိုလည်း ခန့်မင်းထက်ကိုယ်တိုင် မျက်နှာဖုံးကအစ ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါ၏)
(ပုံများပေါ် ကလစ်နှိပ်ပြီး ကဗျာစာသားများကို အကျယ်ချဲ့ ဖတ်နိုင်သည်)
Posted by Nyo Gyi, Don Nyo Gyi, Original Nyo Gyi at 11.11.090COMMENTS
Labels: MY NEWS, MY WRITINGS, OTHERS' POEMS, PHOTOS
ကျနော် ဝေးခဲ့တဲ့ ရွာ
ဝေးကွာခြင်းမှာ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ခံလိုက်ရပြီ ။
တချက်တချက် မူးမေ့ သွားအောင် အလွန်အကျွံ တွေထဲမှာ စွဲနှစ်
ကံကြမ္မာဆိုတာလည်း တစ်ကြောင်းစွဲမျဉ်းတွေမှာ ပြေးဝင်
Posted by Nyo Gyi, Don Nyo Gyi, Original Nyo Gyi at 9.11.090COMMENTS
A Fundraiser for Burma: Burmese Food Fair and Ethnic cultural Dance
Let Help Burma
Labels: MUSIC, OTHERS' NEWS
Posted by Nyo Gyi, Don Nyo Gyi, Original Nyo Gyi at 5.11.090COMMENTS
(၄၊ ၁၁၊ ၂၀၀၉) က အမေရိကန် သံတမန်အဖွဲ့သည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ NLD
ဗဟိုအလုပ်အမှု ဆောင်အဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
(For above photos, I thank
1. phyowai -mmp
Mandalay Yadanabon Newspaper Said, " To Get Democr...
At Least6Men From Yadanabon Newspaper Were Arres...
Computer Staff, AUNG TIN WIN, From Yadanabon Newsp...
Sai Sai Kham Hlaing's Song, Beggars, Thieves, Robb...